XOG: Neymar Jr oo xerada tababarka Barca u tegey inuu kooxdiisa macasalaameeyo! + Sawirro (Wakiilkiisa oo qish bixiyay) – Gool FM
(Barcelona) 02 Agoosto 2017 – Neymar Jr ayaa macasalaameeynaya Barcelona. Sida ay saaka werinayso warbaahinta Spanish-ku laacibka ayaa kasoo muuqday “Ciutat Deportiva” si uu macasalaameeyo saaxiibadii uguna sheego inuu ku wajahan yahay PSG.
Laacibkan reer Brazil ayaa isagoo gaariga ku jooga wuxuu xerada tababarka yimi 9.00 isagoo aan u imanin inuu ka qayb qaato tababarka oo uu Valverde u qorsheeyay 9.30 am, tiiyoo uu isla macallinku u ogolaaday inuu sidaa yeelo.
Arrintan ayaa sii xaqiijinaysa in Neymar uu u socdo PSG, iyadoo uu warku ku xad yahay war uu Twitter soo dhigay wakiilkiisa Wagner Ribeiro oo amaanay Paris isagoo leh: “Paris waa magaalo cajiib ku ah Eiffel Tower, cuntada iyo ciyaarta kubadda cagta”
— Wagner Ribeiro (@wagneribeiro_) 2 augusti 2017
André Gomes, Ter Stegen and Deulofeu returned to training on Wednesday morning. Barça B’s Aleñá and Varo joined the session #FCBlive 🔴🔵 pic.twitter.com/SF3Ed9ZsIq
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 augusti 2017
Wakiilka Neymar oo gaaray dalka Faransiiska